freehold land – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
freehold land properties
ပုဂံညောင်ဦးမြို့ Restaurant ရောင်းမည်။ Lakhs 2,400.00
ပုဂံညောင်ဦးမြို့ Restaurant ရောင်းမည်။
ပုဂံညောင်ဦးမြို့ရှိ အချက်အချာကျ နေရာ‌ကောင်းတွင်ရှိသော restaurant ရောင်းမည်။ နှစ်ထပ်ဆောက်လုပ်ထားပြီး တစ်ထပ်တွင်ဧည့်သည် ၅၀ တစ်ပြိုင်တည်းဧည့်ခံနိုင်ပါသည်။ အပေါ်ထပ်တွင် aircon တပ်ဆင်ထားပြီး မိသားစုအိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါရှိပါသည်။ သန့်စင်ခန်းတွဲလျှက်ရှိပါသည်။ အကျယ်ဝန်း- ၁၇×၆၃ ပေ ဘိုးဘပိုင်မြေ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက် ၂၄၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09795727121, 09794390261 Viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
1020 sq ft 1 bed 1 bath
ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက် ။အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်။ Lakhs 2,500.00
ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက် ။အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်။
အိမ်နဲ့ခြံ ရောင်းမည်။ ဘိုးဘွားပိုင်ခြံလေးပါ။ ပြည်လမ်းကြီးဘေး ဘယ်ဘက်ခြမ်း လမ်းမတန်းကို ချိူးဝင်လိုက်တာနဲ့ ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး နေချင်စရာတကယ်ကောင်းတဲ့ လူသန့်ရပ်ကွက်လေးပါရှင့် ထန်းပင်ကုန်းရပ်ကွက် အင်းစိန်မြို့နယ် 20×70 ပေအကျယ် 2ထပ်ခွဲ Master2ကားပါကင် ကျယ် AC3ကြိုးဖုန်း ၁လုံးပါ water system ရေပူ ရေအေး Furniture အနည်းငယ်လဲပါ ပါတယ် ရှင့် ကျွန်းပါကေးခင်း အရှုပ်ရှင်းကင်း အိမ်မကြီးအနောက်ဘက်မှလဲ ၂ထပ် တိုက် ဆေးမသုတ်ရသေးပေမဲ့ ကြွေပြားခင်း ဗိုထိုင်အိမ်သာနဲ့ ဝရံတာလေးပါပါတယ် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ရပ်ကွက်စျေးလဲ နီးတယ် ဆေးခန်းနီး ကျောင်းလဲနီး အင်းစိန်စျေးကြီးလဲသိပ်မဝေးဘူးနော် ရပ်ကွက် သန့် .. တစ်ရပ်ကွက်လုံးအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပဲ လမ်းက လဲ လမ်းမတန်းဘက် ပြည်လမ်း Yangon […]
Thamaing, Near Bayintnaung. Lakhs 4,000.00
Thamaing, Near Bayintnaung.
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ သမိုင်း၊ ရထားဘူတာနီး၊ စျေးနီး။ မြေအမျိုးအစား-ဘိုဘးပိုင်မြေ ၊ အရပ်စာချုပ်။ မြေအကျယ်- ( 50’×120′ ) ft သိန်း 4000 (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801
6000 sq ft2beds 1 bath
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအနီး၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း Lakhs 8,500.00
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အချက်အချာ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအနီး၊ နဂါးရုံဘုရားလမ်း မြေအမျိုးအစား-ဘိုးဘွားပိုင်မြေ မြေအကျယ်- 65’×65′ ကျယ်ဝန်းပီး တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည်။ Myanmar plaza ၊ အင်းလျားကန်ဘောင် သို့ ၅ မိနစ် downtown သို့ ၁၅ မိနစ်ခန့်သာ။ သိန်း 8500 (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
4225 sq ft2beds 1 bath